Ireo mpitarika ny fizahan-tany LGBTQ + dia mivory any Atlanta hanao 'fihaonam-pianakaviana'
Home » Lahatsoratra farany farany » LGBTQ » Ireo mpitarika ny fizahan-tany LGBTQ + dia mivory any Atlanta hanao 'fihaonam-pianakaviana'
Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • fanabeazana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Zon'olombelona • LGBTQ • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny Fivoriambe Iraisam-pirenena IGLTA dia fiverenana tonga soa aman-tsara ho an'ny mpanatrika, izay nifampizara ny tantaran'izy ireo momba ny fiaretana matihanina, ary koa ny hevitr'izy ireo momba ny fanavaozana, fiarovana ary fampidirana ao amin'ny sehatry ny fizahan-tany LGBTQ +.
Fihaonambe Iraisam-pirenena momba ny IGLTA faha-37 dia fahombiazana lehibe, miaraka amina maherin'ny 400 LGBTQ + sy ireo matihanina mpizahatany mpiara-dia izay misolo tena firenena 27 mivondrona ao Atlanta.
Nisy ny tsenan'ny mpividy / mpamatsy, andro fanabeazana, aingam-panahy ary tambajotra nandritra ny andro maromaro, ary ny famoriam-bola IGLTA Foundation, Voyage.
Ny porofon'ny vaksiny feno na ny fitsapana COVID-19 ratsy dia takiana amin'ny fidirana amin'ny hetsika fivorian'ny IGLTA rehetra.
Ny Fifanarahana IGLTA eran-tany faha-37 dia fahombiazana nisesisesy, miaraka amina 400 LGBTQ + mahery sy mpizahatany mpiaramiasa manana solontena solontenan'ny firenena 27 mivondrona ao Atlanta ho an'ny tsenan'ny mpividy / mpamatsy, fanabeazana, aingam-panahy ary tambajotra mandritra ny andro maromaro, ary ny famoriam-bola IGLTA Foundation, Voyage.
Ny porofon'ny vaksiny feno na ny fitsapana COVID-19 ratsy dia takiana amin'ny fidirana amin'ny rehetra IGLTA convention zava-nitranga tao Atlanta, ary ny valiny dia fiverenan-tsoa fatratra amin'ny fatra ara-dalàna ho an'ireo mpanatrika, izay nifampizara ny tantarany momba ny fiaretana matihanina, ary koa ny hevitr'izy ireo momba ny fanavaozana, fiarovana ary fampidirana ao amin'ny sehatry ny fizahan-tany LGBTQ +.
Filoha / CEO an'ny IGLTA John Tanzella
“Lazainay foana ny IGLTA Mahatsiaro ho toy ny fianakaviana ny tamba-jotra manerantany, satria lasa manokana manokana ny fifandraisana eo amin'ny orinasa », hoy ny filoha / CEO an'ny IGLTA John Tanzella. “Saingy tena niavaka io fihaonana io taorian'ny 18 volana nisarahana. Azonao atao ny mahatsapa ny filan'ny fizahan-tany LGBTQ + isaky ny fotoam-pivoriana, ary nanome hery ny fivoriana fivorian'ny orinasa rehetra eto an-toerana. Tena mirehareha izahay fa mitarika amin'ny fanarenana ny indostrianay. ”
Anisan'ireo zava-nisongadina maro:
Ny lanonam-panokafana tao amin'ny Aquarium Georgia, izay niarahan'ny vahiny nivahiny ho toy ny antsantsa trozona, taratra ary sokatra an-dranomasina dia nibolisatra tao aorian'izy ireo tao anaty tanky 6.3 tapitrisa-litatra (23.8 tapitrisa litatra).
Ny Fikambanana IGLTA Foundation Think Tank ao amin'ny King & Spalding izay nanambatra ny mpitarika avy amin'ny sehatra rehetra amin'ny indostrian'ny fizahantany sy ny fikambanana LGBTQ +; ny fifanakalozan-kevitra dia nifantoka tamin'ny fihaonan'ny fizahan-tany LGBTQ + miaraka amina hetsika fitoviana fitoviana, fahasamihafana ary fampidirana ary ny fomba hiverenana ho indostria matanjaka sy mandray olona kokoa. Ho avy ny tatitry ny fivoriana.